Shiinaha warshad maaskarada qalliinka iyo soosaarayaasha | SUREZEN
1. Heerka fasalka qalliinka caafimaadka, maro dhalaalaysa dhalaalka caafimaad.
2. Badeecadani waxay leedahay kahortag wanaagsan oo seddex lakab ah iyo waxqabad ilaalin ah, oo si wax ku ool ah uga hortageysa walxaha jeermiska.
3. Si wax ku ool ah looga hortago faafidda dhiigga, dheecaannada jirka iyo buufinta inta lagu jiro hawlgalka duullaanka.
4. Shaashadda shaashadda lakabyada badan ayaa si hufan u kala shaandheyn karta lakabka lakabka waxayna ku raaxeysan kartaa neefsashada si ka wanaagsan.
6. Cadaadiska neefsashada oo hooseeya, sifeynta hawada sare ee waxtarka leh, laalaabmay si loo sameeyo meel neefsasho ah oo 360 ° ah, oo aan lahayn dhego
Alaabtaan waxaa nadiifiyay macdanta 'ethylene oxide' waxayna ku habboon tahay shaqaalaha caafimaadka iyo shaqaalaha la xiriira, iyagoo xiran meelo ku yaal isbitaallada, iskuulada, qaybaha, xarumaha ganacsiga iyo meelaha caamka ah.
Waxay ku habboon tahay ilaalinta aasaasiga ah ee shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira, iyo sidoo kale ka hortagga faafidda dhiigga, dheecaannada jirka iyo buufinta inta lagu jiro hawlgallada duullaanka. Heerka ilaalinta waa mid dhexdhexaad ah oo wuxuu leeyahay waxqabadka ilaalinta neefsashada qaarkood. Badanaa waxaa lagu xiraa jawi nadiif ah oo leh heer nadaafadeed oo ah 100,000 ama ka yar, ka shaqeynta qolka qalliinka, kalkaalinta bukaannada leh hawlgabka difaaca jirka oo hooseeya, iyo qabashada hawlo daloolin daloolin. Caafimaadmaaskaro qalliinwuxuu xannibayaa bakteeriyada badankeeda iyo fayrasyada qaar, wuxuu ka hor istaagi karaa shaqaalaha caafimaadka inuu cudurka ku dhaco, isla mar ahaantaana wuxuu ka hortagaa in si toos ah u soo baxaan unugyada noolaha ee ay qaadaan neefta shaqaalaha caafimaadka, taasoo khatar ku ah bukaanada qalliinka lagu sameynayo. Caafimaadmaaskaro qalliinwaxay ubaahantahay hufnaan sifeyn ah in kabadan 95% bakteeriyada. Maaskarada qalliinka ee la tuuri karo waa in sidoo kale la siiyaa bukaanka neefsashada ee laga shakiyo si looga hortago halista infekshinka shaqaalaha kale ee isbitaalka loona yareeyo halista infekshinka iskutallaabta.
heerka amniga: 0469-2011 maaskaro qalliin caafimaad magaca sheyga: Maaskarada qalliinka caafimaadka ee la tuuri karo
3. Ka dib marka maaskaradu qoyan tahay ama ku wasakhaysan tahay qoyaan, gasho maaskaro cusub oo nadiif ah oo qallalan;
4. Dib ha u isticmaalin waji-gashiga la tuuri karo. Maaskarada la tuuri karo waa in la tuuraa isticmaal kasta ka dib.
1. Maaskarada guud ee caafimaadka waa in la beddelaa 4 saacadood ka dib isticmaalkeeda dibna looma isticmaali karo; iyo haddii aad qashin hoos uun u tuurtid oo aadan dad kale taaban, waxaad maaskaro geyn kartaa hawo hawo, qalalan, iyo nadaafadeed, ama waxaad ku ridi kartaa meel nadiif ah. , Boorso warqad hawo leh oo dib loogu isticmaalo.
2. Markaad maaskaro dhigayso, waxa fiican inaad si gooni ah u kaydiso oo aad u muujiso qofka u adeegsanaya si looga hortago kuwa kale inay u qaataan oo si qalad ah u isticmaalaan, taasoo keenaysa halista infekshinka iskutallaabta.
3. Maaskarada qalliinka ee caafimaadka, jeermiska dila, khamriga, iwm looma isticmaali karo jeermiska, xitaa in ka badan laguma dhaqi karo biyo. Isticmaalka ka dib, ku rid boorso ama qashin qashin loogu talagalay maaskaro caafimaad.
Hore: Maaskaro ilaalin caafimaad oo la tuuri karo